Miara-miasa amin'ny kalitao fahatelo labortary, NFC maso hentitra vokatra tsara - China Ningbo NFC Simika
Miara-miasa amin'ny kalitao fahatelo labortary, NFC maso hentitra kalitaon'ny vokatra
Post fotoana: Sep-18-2017
Ningbo NFC Simika CO., LTD
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, azafady miala ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora. Nanontany ny Pricelist
4-Amino-3-phenylbutyric asidra (Phenibut)
Phenibut no ampiasaina ao amin'ny Rosia ho toy ny zava-mahadomelina ny fanafody hitsaboana ny aretina isan-karazany, anisan'izany ny fanahiana, ny fahaketrahana, asthenia, mahita tory, alkaolisma, adin-tsaina posttraumatic fikorontanana, Niakanakam-piteny, ary vestibular aretina ...
HTA dia phenolic iombonana. Hydroxytyrosol base no matetika indrindra ao amin'ny oliva koa ny acetate plant.The hydroxytyrosol mitombo tahaka ny bioavailability. Hydroxytyrosol dia iray amin'ireo mahery indrindra finday fahasalamana ...
Curcumol dia madio monomer mitoka-monina avy any amin'ny antitumor Rhizoma Curcumaeis asa. Tsy anti-milaza zavatra sy antiproliferative mpandraharaha. Dia mampihena LPS-mianatra NO famokarana amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra mRNA hisakanana iNOS.
Isoxepac dia efa mandroso kafa ny Olopatadine, Olopatadine dia antihistamine (ary koa ny andry tokana anticholinergic sy sela stabilizer), namidy ho levitra maso indray mitete vokarina avy Alcon tamin'ny iray amin'ireo hery telo: ...
Miara-miasa amin'ny kalitao fahatelo labortary, NF ...